Mugabe's Body Believed to be Returning to Zimbabwe
SINGAPORE - A vehicle believed to be carrying the body of former Zimbabwe President Robert Mugabe left a Singapore funeral parlor Wednesday morning to be returned to his homeland for burial in the African nation he ruled for decades.
Mugabe died Friday in a Singapore hospital at age 95. Zimbabwe's Vice President Kembo Mohadi was seen arriving at the funeral parlor Tuesday afternoon, and a Zimbabwe state newspaper said his body would return to the country Wednesday.
Mugabe was an ex-guerrilla chief who took power in 1980 when Zimbabwe shook off white minority rule. He enjoyed strong backing from Zimbabwe's people in the initial years, but that support waned following repression, economic mismanagement and allegations of election-rigging.
Zimbabwe's information minister said Mugabe's body will lie in state at two stadiums in the capital for three days. His burial is scheduled for Sunday.